Milla oo caawimaadeeda caruurta Soomaaliya ku heshay bilad | Somaliska
Gabadha yar ee 9 sano jirka ah oo lagu magacaabo Milla Martin waxay dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ku mashruulsaneyd iibinta macmacaanka si ay lacagta ka soo baxda ugu quudiso caruurta geeska Afrika qaasatan kuwa Soomaaliya ee macaluusha la ildaran. Milla oo aan horey mowduuc uga qornay ayaa iyada iyo walaalkeed waxay noqdeen kuwo hawshooda la aqoonsaday.
Gabadhaan yar ayaa abuurtay shabakad weyn (Bullhjälpen) oo caruur ah kuwaasoo magaalooyinka kala duwan ku iibiya macmacaanka loo yaqaan (Bulle) si ay faaidada ka soo baxda ugu biiriyaan hay’adaha caawinaya caruurta. Mashruuca gabadhaan yar ayaa si weyn loola dhacay oo lagu soo qaatay qeybo badan oo ka mid ah warbaahinta Sweden.
Hawsha Milla ayaa xitaa waxay gaartay wadankaasi Maraykanka iyada oo ku guuleysatay bilad iyo lacag. Sida ay bogeega Facebook ku qortay waxaa warqad u soo diray urur ka dhisan Maraykanka oo gudoonsiiyay bilad iyo lacag gaareysa 10,000$. Milla ayaa sheegtay in lacagtaas ay ku biirin doonto lacagaha ay soo uririyeen oo caruurta lagu quudinayo. Ilaa hada ayaa Milla iyo asxaabteeda waxay soo ururiyeen lacag ka badan 200 000kr oo ku dhow 30,000$.
Gabadhaan yar ayaa waxay tusaale u tahay in bani’aadamku meelkasta oo uu joogo ilaahay ku manaystay caqli iyo naxariis. Soomaalida waxaa laga doonayaa in ay iyaga isku naxariistaan oo isgacan qabtaan. Waa in aan tusaale u qaadaa gabadhaan yar ee caqliga badan. Masha Allah. oo waa in aan caruurteena ku ababinayaa gargaarka bani’aadanimada iyo qiimaha uu leedahay.
maanshalh waloo bahanyah in sidaas caruurtena soomaliyeed loogu barbaryi ilahy ba caqli kuma teestay milan maanshalh
mansha allaah ayaan leyahay milla, gabadhaan yar waxaan leeyahay Tusen tack dhmaantena aan kutusaala qadano cawinaada gabadhaan yar bili aadanka waa inuu is caawiyaa asaga illaah kasokow
Aadbeey U mahadsantahay …………
Bishii Sebtemper oo ahayd billihii Abaartu Ugu darnayd , ayaa maalin anigoo markaa xaafada imid waxaa ii soo Qaraacay Albaab , caruur Swedhish ah oo labo wiil ahayd , da’dooda ilaa 9-ilaa 13 ayaan ku qiyaasay , waxay isla markaan albaabka furay igu dhaheen , Caruurta Soomaaliya ee Abaaraysan ayaan lacag u aruurinaynaa , mana caawin kartaa !!
Xaqiiqatan aadbaan u gilgilyooday , aadbaana ugu farxay , hase ahaatee waxaan is waydiiyay , da’yarteena iyaga ku da’da ah ee Soomaaliyeed aaway xaalkooda _
Alloow Gacma Kale hanoo baahin , Alloow Naga Kaafi , adaa Raaziq Ahe ,
Alxamdulillaah in Alle hadda Roob nasiiyay .
Aniga waxaa guriga igu soo garacay 2 wiil oo yar yar waxay i dhaheen waxan cawinayana somaliya ee naga iibso kaarkan wana 50kr markas ban ka iibsaday mise waa spel yacni qamar way i siren kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk laakiin Milla Martin waxan leyahay tusen tack
aad iyo aad ayaad u mahadsantihin anagoo daris ah millan waxay iga codsatay inaan commenta uga qayb galo ee somalidu ka bixinayaan
waxayna leedahay aad iyo aad ayad u mahadsantihin somaliyey
lakin maxaan uga waayyay bulsho waynta somaliyeed wax abaal gud isiiya dhirigalin ayay ii noqon lahayd madaama aan dadka aan cawinayo ay yihin somali jawaab .
Asc, ugu horeyn waxan jeclahay inaan halkaan uga mahadceliyo Millan, asxaabteeda iyo waalidkeedba howsha balaaran ee ay caruurta soomaaliyeed ugu gurmanayaan, mana ilaawi doono abaalkey noo galeen. Walaahi maalintii iigu horeysay een wararka gabadhaan yar aan Tvyada iyo Webka ku arkay waan ilmeeyay qiira daraadeed. Waana arrin ku dayasho mudan runtii.
Waxaan kaloo rabaa inaan walaalkey/walaasheyda soo qortey Afka Millan sheegayna/sheegteyna iney deriska la tahay gabadhan yar aad iga gaarsiiso Soomaalida ku nool magaalada ay gabadhaani ku nooshahay iney xaflad u sameeyaan hadiyadna ay guddoonsiiyaan iyada iyo intii howshaas ku garabgashayba si aanan u noqon dad abaal laawayaal ah xitaa waan idin kala qeybgalayaa oon waqtigeygana idiin hurayaa meesha iyo saacadda lee iisoo sheega inshaa Allaah. Farriintana halkaan ayaad iigu dhaafi kartaan.
Asc, aniga ila ahan caqliga inuu ku kooban yahay Millan iyo walaalkeed oo qura waxan leeyahay waalidka ayaa ah tusaalaha ay ku daydaan caruurta. Somalida ilmahoda u direysa irida garaaca halkeey joogaan??????? jawaab u baahan telfonadii baaba la baray ilmahii hadii uu afrika yahay ha qabanina. Alaha dharjiya dadka aduunyada waa wareergo Soomaliyey nin shalay baahnaa baa maanta dhergan xasuusta mar walba Ale ayaa deeq badan. Wabilahi Tawfiq
Muma ayaan laqabaa waridka dhalay caruurtaan ayaa ah kuwo runtii aad ufiican illahay diintiisa haku soo hanuuniyo dhamaantood
qofka ku hadlaya magaca ama afka gabadhan yar ee arinteedan yaabka leh warbaahintaydu sheegeyso fadlan adrresska noo sheeg si midkeena u dhaho tack. Aniga waxaa ku noolahay wadan ka mid ah east afrika. Waad mahadsanid aan so dhaho dhiirigelin beey u tahay
waaa ariiin aad iyo aad uu wacan ha lagu daydoo ooo umaada ha la cawiiyo
milla tack tusen ilaahey ha ka dhigo islaam islamku waa u bahanyahey sidada o o kale gaba aad u naxariis badan.adiga iyo waalidkaba waa mahadsan tihiin iyo weliba asxabtada.hejd[.
waxana leeyahay marka hore millan wan ku salamay.marka xigto tixgabay ban raba inana halkaan ku iraah.milan gobad tahay gobi gob dhashaad tahay gacal iyo xigalaad tahay mid ay u midowday garad bad tahay mid garaadkeeda iyo karaankeeda koreyaad tahay millan ilaahey aqiro iyo aduunyo nabad ku war ilaahey jirkaada cadaab ha kala xishood labadii walid oo ku dhashayna aad iyo aad ayaan ogu mahad celinayaa waxaana ku leeyahay markasto ayaan niyad akugu ahayn donaa milyaneey guleyso wlaigaaa